मलेसिया सरकारको चेतावनी : मौकाको फाइदा लिनुहोस, अन्यथा डिपोर्ट गरिनेछ ! -
Home News मलेसिया सरकारको चेतावनी : मौकाको फाइदा लिनुहोस, अन्यथा डिपोर्ट गरिनेछ !
मलेसिया फेरि पनि एउटा अ‘वसर को स”दुप“योग गर्न आग्रह गरेको छ। सबैलाई सुझाव सहित अनुरोध गरेको हो।
मलेसिया मा रहेको नेपाली दूतावास ले त्यहाँ रहे का नेपाली श्रमिक लाई गैर कानुनी अर्थात् ‘अनडकुमण्टेड’भएर नबस्न आग्रह गरेको छ ।मलेसियाको सरकारले त्यहाँ गैर कानुनी भएर रहेका आ”प्रवासी श्रमिक लाई जरिवाना तिरेर आफ्नो कानुनी अवस्था सुधार्न मौका दिएको छ ।
Previous articleयस्तोसम्म छा डा हुन थाल्यो रत्यौली,सुन्नै नसकेर उठेर हिडें मान्छे (भिडियो हेर्नुस्)
Next articleदशैमा स्वादिलो खशिको माशु बनाउने तरिका (भिडियो सहित)